Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Christmas and the New Year holidays hotel sales
Ọ bụ oge ịde akwụkwọ a staycation maka Christmas na New Year ememe! Oge zuru oke iji meefu HK$5,000 fọdụrụnụ nke akwụkwọ ikike oriri gị na-agwụ na njedebe nke afọ.
Trip.com na-ebupụta 11.11 Mega Sale maka izu abụọ site na 1 ruo 14 Nọvemba, ma ọ dịkarịa ala ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ na-ewu ewu na-emeghe maka ntinye akwụkwọ ruo 50% kwa ụbọchị. Ọbụna ihe na-akpali akpali bụ Trip.com "Triple Spending privileges", nke ga-agba ọsọ na 1 na 11 November, nke a ga-enwe 1) HK $ 111 Kupọns; 2) 11% kwụsịrị Kupọns; na 3) ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka naanị HK$11.
Na mgbakwunye na ego dị iche iche na ebe nkiri na-ewu ewu na tiketi mmemme dị ka Keigo Open House na ihe ngosi "Jurassic X The Dinosaur Park", iwu 10 mbụ na 11 November maka Ocean Park na Ocean Park Water World tiketi ga-eru eru maka a Tiketi nke abụọ na HK $11.
Site na 1 ruo 10 Nọvemba malite na 11:11 nke ụtụtụ kwa ụbọchị, na site na 00:00 (etiti abalị) na 11 November, ndị ọrụ Trip.com nwere ike ịnụ ụtọ ire ọkụ n'ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahọpụtara na HK$111 ma ọ bụ HK$1,111. Ihe ndị a na-enye na-abịa na nke mbụ, na-ebute ụzọ, na-egosi na ọ dịghị ihe na-erughị ụlọ oriri na ọṅụṅụ 50.